के हो सरिया कानुन, कस्तो छ सजायको व्यवस्था? « AayoMail
2021,20 August, 11:45 am
अफगानिस्तानलाई नियन्त्रणमा लिएको तालिबानले देशमा सरिया कानुन लागू गर्ने बताएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा तालिबानका प्रवक्ताले मिडिया र महिला अधिकारजस्ता मुद्दाहरू इस्लामिक कानुनले गरेको व्याख्या अनुसार हुने बताइसकेका छन्। तर, तालिबानले अहिलेसम्म यसबारे विस्तृत जानकारी दिएको छैन।
पाकिस्तानमा महिला शिक्षाको वकालत गरेकी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजाइलाई तालिबानले १५ वर्षको उमेरमा गोली हानेको थियो। उनले तालिबानले व्याख्या गर्दै आएको सरिया कानुन अफगानिस्तानका महिला र किशोरीहरूको सुरक्षाका लागि खतरनाक हुनसक्ने चेतावनी दिँदै आएकी थिइन्।
तालिबानले सन् १९९६ देखि २००१ सम्म अफगानिस्तानमा शासन गरेको थियो। त्यतिबेला महिलाहरूलाई काम गर्न र शिक्षा लिन अनुमति दिएको थिएन। आठ वर्षकै कलिलो उमेरमा बालिकाहरूले बुर्का लगाउनुपर्थ्यो। यतिमात्र होइन पुरुष साथमा नभएसम्म महिलालाई बाहिर जान दिइन्नथ्यो। तालिबानले बनाएका नियमको अवज्ञा गर्ने महिलाहरूलाई सार्वजनिक रूपमा कोर्रा हानिन्थ्यो।
सरिया कानुनले अपराधलाई दुई सामान्य वर्गमा विभाजन गरेको छ। पहिलो, ’हद’, जुन गम्भीर अपराध हो। जसका लागि अपराध तय गरिएको छ। दोस्रो, ’तजीर’ अपराध हो। यसको सजाय न्याय दिनेको विवेकमा छोडिएको हुन्छ।
’हद’ वाला अपराधमा चोरीलाई राखिएको छ। जसमा चोरी गर्नेको हात काटेर सजाय दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी परस्त्री वा परपुरुषसँग यौन सम्बन्ध राख्नेलाई ढुङ्गाले हानेर मृत्युदण्ड दिन सकिने व्यवस्था छ। ’हद’ अपराधका लागि दण्ड तोक्नुभन्दा अगाडि बलियो प्रमाणको आवश्यकता पर्छ।
धर्म त्याग्नेलाई के फाँसी हुन सक्छ?
धर्म त्याग्ने विषयमा मुसलमानहरूबीच नै ठूलो मतभेद रहेको छ। अधिकांश मुसलमान विद्वानहरू धर्मान्तरणको सजाय मृत्यु हुनुपर्नेमा एकमत छन्। तर, कतिपय मुस्लिमहरू धर्मान्तरणको सजाय अल्लाहलाई छोडिदिनुपर्ने बताउँछन्। कुरानमा भने ’धर्ममा कुनै बाध्यता नभएको’ उल्लेख छ।